पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको राजनीतिमा अलग धुव्रका रूपमा स्थापित छन् । उनी सत्तामा हुँदा मात्तिने र आत्तिने नेताहरूको कित्तामा पर्दैनन् । सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वकै बेलादेखि अध्यक्ष प्रचण्ड समूहसँगको ‘टसल’ खेप्दै आएका डा.बाबुराम अन्ततः २०७२ साल असोज ९ गते विधिवत रूपमा नेकपा माओवादी पार्टीबाट बाहिए र नयाँ शक्ति नेपाल गठन गर्न पुगे । बाबुरामका राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनका उताव–चढाव १५ वर्षदेखि एक/एक नियाल्दै आएका छन् नयाँ शक्ति नेपालका प्रचार–प्रसार विभाग प्रमुख एवम् डा. भट्टराईका पूर्व स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डे । १८ वर्षको कलिलो उमेर देखि नै डा. भट्टराईको सामीप्य र साथ पाएका उनले डा. भट्टराईलाई अत्यन्त नजिकबाट बुझेका छन् ।०४२ साल वैशाख ९ गते अर्घाखाँचीमा जन्मिएका पाण्डेले कहिले भारतको राजधानी दिल्ली त कहिले नेपालकै विकट जिल्लामा बसेर राजनीतिक संघर्ष गरे । उनको यात्राका सारथी थिए बाबुराम । बुवा स्व. भक्तिप्रसाद कम्युनिष्ट नेता थिए । बुवाकै राजनीतिक प्रभावले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिए उनी । पढाई पनि त्यस्तै भयो । विद्यालय फेर्नुप¥यो, विश्व विद्यालय फेर्नुप¥यो । डा.बाबुरामको छहारी पाएका पाण्डेले जस्तै समस्या आएपनि पढ्न भने छाडेनन् । उनले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेँ । हाल स्नातकोत्तर तहमा अध्ययरत छन् । उनलाई सबैले डा.भट्टराईको स्वकीय सचिवको रूपमा सीमित रहेको देख्छन् । पाण्डेको राजनीति यात्राबारे कमैलाई मात्र थाहा छ । पाण्डेले बाबुरामसहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, किरण, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेतासँग पनि संगत गरेका छन् । बाबुरामलाई आफ्नो मुख्य अभिभावक मान्ने विश्वदीपलाई पनि बाबुरामले पनि उत्तिकै माया गर्ने पाण्डेले सुनाए । त्यही माया, ममता र स्नेहले होला सायद पाण्डेले जीवनमा बाबुरामलाई साथ नछोडने वाचा पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘यो जीवनभर घर परिवार छोड्न सक्छु तर बाबुराम छोड्न सक्दिन ।’ बाबुराम पाण्डेसँग राय–सल्लाह लिन्छन् । आफ्ना निर्णयको पहिलो प्रतिक्रिया उनैबाट लिन्छन् । पाण्डेको दाबी छ, ‘राजनीतिक यात्राको यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा मैले कहिल्यै पनि बाबुरामलाई दुरुपयोग गरिन । ’ जनयुद्धको एउटा कमाण्डर, पूर्व प्रधानमन्त्रीका ‘प्राइभेसी’ कुरा छन् । सबै खोल्न पनि मिल्दैन् । यसप्रति विश्वदीप सधैं सजग र सचेत छन् । उनी बाबुरामको जिन्दगानी आफ्नै जस्तो ठान्छन् । आत्मीय छन् । भोगाइले मान्छेलाई व्यवहारिक र अम्बल बनाउने रहेछ भन्ने लाग्छ विश्वदीपलाई, उमेरले होइन । प्रस्तुत छ, डेढ दशकदेखिकोे बाबुरामको राजनीतिक यात्राबारे विश्वदीपले अमरवाणी अनलाइनका प्रतिनिधि रमेश दवाडीसँग गरेको कुराकानीः
मैले सानै उमेरमा डा.बाबुरामसँग काम गर्ने मौका पाएँ । यस अर्थमा म आफूलाई भाग्यमानी मान्छु । कुनै समय यस्तो थियो कि ‘बाबुराम’ काल्पनिक नाम हो भन्ने सम्मको अवस्था थियो । म त्यहि बेला उहाँसँग जोडिन पुगेँ । १५ वर्षे यात्रामा मैले उहाँ जत्तिको इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट नेता देखे/भोगेको छैन् । उहाँ मेरो आइडल नेता पनि हो । उहाँको कार्यशैली र निर्णय क्षमतासँग म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु । हाम्रो सम्बन्ध १५ वर्षदेखि सुमधुर छ । मैले हालै नयाँ शक्ति पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको छु । त्यो पनि मैले उहाँसँग गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारी दिएको अनूभुत मैले गरेको छु । सानै उमेरमा बुबाको प्रभावले गर्दा राजनीतिमा लागें । राजनीतिको यात्रा दुःखको भारी हो तर, मुक्तिको मार्ग पनि त्यहिंबाट प्राप्त हुन्छ ।
बाबुरामसँगको पहिलो भेट
मेरो घर रूपन्देहीको बुटवल हो । ०५६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिएँ । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीको जिल्ला संगठनमा सक्रिय थिएँ । मेरो बुवा 'स्व.भक्ति पाण्डे' पनि माओवादी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला राज्यपक्षले माओवादीमाथि दमन गर्न संकटकाल घोषणा गरिसकेको थियो । त्यतिबेला सर्वसाधारणलाई त दुःख थियो भने माओवादी कार्यकर्तालाई झनै आर्मी–पुलिसले सताउथे । म पनि यस्तो दमनप्रति खरो रूपमा उत्रिने स्वभावको थिएँ । क्रान्तिका पुस्तक पढ्ने र उर्जाशील उमेर भएर होला म सरकारी दमनको विरोध गर्थें । सायद त्यहि भएर पनि हो कि बुवाले मलाई बाबुरामको राजनीतिक यात्रमा जोड्नु भएको । त्यतिबेला बाबुरामलाई टाठोबाठो मान्छे स्वकीय सचिव चाहिएको रहेछ । कसलाई राख्ने भनेर उहाँ निकट नेताहरूको सल्लाह भएछ । माओवादी नेता डोरप्रसाद उपाध्याय र दीनानाथ शर्माले ‘भक्ति पाण्डेको छोरा छन्, टाठा पनि छन्, पढ्दै पनि छन्, नयाँ कुरामा रूची पनि राख्ने खालका छन्, तिनलाई ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने सल्लाह बाबुरामलाई दिनुभएछ । ‘ल ठीक छ, तीन महिना हेरौँ, तीन महिनामा पास भए भने निरन्तर गरौँला, होइन भने अरू सोचौँला’ भन्नुभएछ बाबुरामले । त्यसपछि एकदिन घरमा पार्टीका नेताहरू आएर ‘तिमी एक ठाउँमा जानुप¥यो’ भन्नुभयो । त्यतिखेर म एसएलसीको तयारीमा थिएँ । आर्मी, पुलिसले दुःख दिने गरेकाले म बुटवलमा अङ्कलसँग बसेर पढ्थें । मलाई नेपाल बाहिर लैजाने भन्नुभयो । पास भइस् भने निरन्तर हुन्छ, फेल भए तीन महिनामा फिर्ता हुन्छन् भन्नुभयो । पास–फेलको कुरा मैले बुझिन् । मेरो पढाई के गर्ने भन्ने कुरा भयो । पढाई उतै गएपछि गर्न मिल्छ भनेपछि ठीकै छ भनेर म उहाँहरूको साथमा हिडेँ । मलाई गोरखपुर लैजानुभयो । एकदिन त्यही बसियो । त्यतिन्जेल मलाई किन ल्याइएको हो भन्ने बेखबर थिए । गोरखपुर एकदिन बसेपछि भोलिपल्ट लखनऊ पुगियो । बुवा र रामप्रसाद बञ्जाडे मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो । टे«नमा उहाँहरूले ‘तँलाई बाबुराम भट्टराईको स्वकीय सचिव रूपमा लैजाँदै हो’ भन्नुभयो । मैले गम खाएँ । त्यतिबेला बाबुरामबारे अनेकन हल्ला सुनेको थिएँ । ‘बाबुराम प्लाष्टिक सर्जरी गरेर हिड्छन् रे, ओल्लोडाँडा, पल्लोडाँडामा जोगी बनेर हिड्छन् रे’ भन्ने सुनेको म एकाक्सी उहाँकै स्वकीय सचिव बनाउने भन्दा जिस्क्याए जस्तो पनि लाग्यो । राजनीतिबारे त्यति अनुभव नभएको मलाई के त्यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्थे होलान् भन्ने पनि लाग्यो एक मनमा । यस्तै–मनोवाद गर्दागर्दै लखनऊ पुगियो । त्यहाँ माओवादी नेता लेखराज भट्टको डेरामा डा. बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी लेखराज भट्ट र उनकी श्रीमती हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई मैले पहिलो पटक देखेँ । त्यसपछि म पक्का भएँ, बाबुराम छैनन् भन्ने मिथ्या हल्ला फैलाइएको रहेछ । त्यति बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले बाबुराम र प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो । माओवादी आंतकवादी नेताहरूको टाउको ल्याउनेलाई ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार भनेर । त्यतिबेला म बाबुरामसँग जोडिए । म आफूले पाउन लागेको जिम्मेवारीप्रति रत्तिभर पनि विचिलित थिएन् । बाबुराम त्यतिबेला नेपाल आउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । पहिलो पटक डा.साबसँग कुरा भयो । उहाँले ‘तपाईं हिसिला जीसँग जानुस्, हामी चैँ बाँचेर आइएछ भने भेटौंला’ भन्नुभयो । मन अमिलो भयो ।
राजनीति र बाबुराम भट्टराईको साथ संगत गर्दा छोटो समयमा धेरै ज्ञान प्राप्त गरें र सिक्ने अवसर पाएँ । बाबुराम विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थी बन्न पाएकोमा मलाई गर्व छ ।
म लखनऊबाट हिसिला म्याडमसँग दिल्लीतिर लागेँ । म्याडमले बाटोमा गाइड गर्नुभयो । ‘हामीसँग बस्ने हो ? ’ भनेर सोध्नुभयो । तराईमा बसेको मान्छे म ‘टुटेफुटे’ हिन्दी त बोल्थे नै । हिसिला म्याडमले मैले गर्नपर्ने कामहरू, प्राइभेसी कसरी मेन्टेन गर्ने जस्ता कुराहरू गाइड गर्नुभयो । त्यसको २०/२५ दिनपछि डा.साबहरू आउनुभयो ।
माओवादी नेताहरू दिल्लीमै भएका बेला सरकार–माओवादी पहिलो युद्धविराम भङ्ग भएको थियो । वार्ता भङ्ग भएको ‘स्टेटमेन्ट’ बाबुरामले नै तयार गर्नुभएको थियो । मैले त्यो टाइप गरेँ । बाबुरामको काम गर्ने लगाव लोभ लाग्दो छ । उहाँ कुनै काममा लागि परेपछि फत्ते नगरी छोडनु हुन्न । भर्खर–भर्खरमा उहाँ काममा लय भर्न मलाई निकै गाह्रो हुन्थो । म १८ घण्टा काममा खट्थेँ त्यतिबेला । खाना पकाउनेदेखि लिएर आइपर्ने सबै काम गरेँ । तीन महिना फेल भए त फिर्ता हुनुपथ्र्यो, फेल भैइयो भने फेरि जाने ठाउँ कहीँ थिएन । पढाई पनि बीचमै छुट्यो । पढाईमा फेल भएपनि डा.साबसँग बस्न पाउने परीक्षामा पास हुनु थियो मलाई । दायाँबायाँ गर्दा फ्युचर राम्रो हुन्न, बुबाले ‘अहिले तँलाई धेरै दुःख हुन्छ । भविष्यको लागि चैँ मैले यहाँ छोडेको हो । अन्यथा नलिनु, मेहनत गर्नु’ भनेर दिमाग यस्ता कुरा हाल्नुभएको थियो । फेरि डा.साब जस्तो मान्छेसँग बस्न पाउँदा यसलाई अवसरको रूपमा लिनुप¥यो भनेर आइपर्ने काम सबै गरेँ ।
मेरो प्रचण्डसँगको भेट पनि रोचक छ । प्रचण्ड कहाँ छन्, के छन् भनेर सोध्न गाह्रो थियो । प्रचण्डबारे मलाई जिज्ञासा बढ्यो । ‘पद्मरत्न तुलाधर भनेको प्रचण्ड हो, ज्ञानेन्द्र शाह भनेको प्रचण्ड हो’ भन्ने हल्ला सुनिन्थ्यो । प्रचण्ड–बाबुराम बस्ने ठाउँ एकदम प्राइभेसी हुन्थ्यो । उहाँहरू बस्ने ठाउँमा १/२ जना बाहेक अरूले बसेको घर नदेख्ने, भेट्न परे पनि बाहिर भेट्ने व्यवस्था थियो दिल्लीमा । एक दिन डा.साबले ‘एकजना मान्छे आउँदैछन् भन्नुभयो । दिउँसो १२-१ बजेतिर घण्टी बज्यो । मैले ढोका खोलें । ‘भक्ति जीको छोरा तपाईं हो ?’ भनेर मसँग हात मिलाउनुभयो । मैले हो भनेँ । यसो भन्दा मलाई प्रचण्ड उहाँ नै हो भन्ने थाहा भएन । डा.साबले पनि मलाई भन्नुभएको थिएन । त्यसपछि उहाँहरू बस्नुभयो । भित्र कुराकानी गर्नुभयो । हिड्ने बेलामा धाप मार्दै ‘ल ! राम्रो गर्नुस्, मिलेर काम गर्नुपर्छ’ भनेर उहाँ निस्कनुभयो । उहाँ गइसकेपछि डा.साबले ‘प्रचण्ड’ भन्ने तिनै हुन है’ भन्नुभयो । मलाई थकथक लाग्यो अनुहारै राम्रोसँग नियालिएन भनेर ।
बाबुरामसँग फोटो खिच्ने रहर
मलाई पहिले देखि बाबुरामसँग फोटो खिच्ने रहर थियो । तर, त्यतिबेला क्यामेरा थिएन । सुरक्षाका दृष्टिले पनि संवेदनशील थियो । तैपनि म बाबुरामसँग बजार जाने बेला फोटो स्टुडियो देखेपछि ‘फेटो खिचौं’ भनेर प्रस्ताव गर्थे । उहाँ कुनै बहाना बनाएर टार्नु हुन्थ्यो । २/३ दिन टार्नुभो । मैले उहाँलाई फेरि पनि फोटो खिच्न अनुरोध गरेँ । मलाईं चैं किन टार्नुभएको छ भनेर मनमा पथ्र्यो । मैले धेरैचोटी भनेपछि डा.साबले बुबालाई फोन गरेर भन्नुभएछ ‘भाईले हैरान पा¥यो फोटो खिचौं भनेर । प्राइभेसीको कुरो हुन्छ यताउति हुन्छ ।’ मलाई बुवाको फोन आयो । बुवाले गाली गर्दै भन्नुभयो, ‘फोटोसोटो खिचौं नभन्त, तैंले नपठाउनुलास् बाइचान्स फोटो यताउति भयो भने नराम्रो हुन्छ । लेटेस्ट फोटो हुन्छ । फोटो खिचौं नभन्नु, पाइभेसीको अर्थ हुन्छ, अहिले नगर्नु’ भन्नुभयो । बुवाले भनेपछि मैले कुरा बुझेँ । निकै वर्षपछि मात्र उहाँसँग फोटो खिचेँ । जुनबेला मोहन वैद्यहरू पक्राउ परेपछि रोल्पामा बसियो आठ महिना । त्यसबेला डा.साब आफैंले ‘ल आउनुस् फोटो खिचौं’... भनेर बोलाएपछि फोटो खिचें । मेरो वर्षौ को उहाँसँग फोटो खिच्ने धोको पूरा भयो ।
द्वन्द्वकालको बेला थुप्रै बिर्सनै नसकिने क्षण छन् । रोल्पामा बस्दा सुरक्षा खतरा बढ्यो । प्रचण्ड, बाबुराम, जनमुक्ति सेना हामी सबैजना एकै ठाउँमा थियौं । प्रचण्ड र बाबुरामको एउटै घरमा मिटिङ हुन्थ्यो । ओल्लोडाँडा र पल्लो डाँडामा उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो । सुरक्षा घेरा भने एउटै हुन्थ्यो । रोल्पामा आर्मीको हेलिकप्टरले सर्च थाल्यो । हामी बसेकै घर ताकेतामा पर्यो । अब, फायर थाल्ने भयो भनेर सबै डरायौं । भाग्ने पनि ठाँउ थिएन् । अब मृत्युको घडी कुरिबसेको अनुभव भयो त्यतिबेला । प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि सिध्याउने भए भन्ने लाग्यो । एकाएक के भयो थाहा भएन, तीन राउण्ड घुमेर हेलिकप्टर फर्कियो । किन फर्कियो थाह भएन् ।
लालध्वजमाथि दु:खद् कारवाही माओवादी पार्टीमा छँदा पार्टीले गरेको कारबाही म बिर्सन सक्दिन् । कलिलो मेरो मानसपटलमा कारवाही नराम्रा मान्छेलाई गर्छन् भन्ने थियो । बाबुराम भट्टराई त कुनै कोणबाट पनि नराम्रो मान्छे हुनुहुन्न । सबै पार्टीकै लागि काम गरेको, पढेलेखेको मान्छे, घरपरिवार, त्यागेर आएको मान्छे, पार्टीलाई राम्रो गर्दागर्दा पनि किन कारवाही ? भन्ने लाग्थ्यो । मलाई पार्टीप्रति शंका उत्पन्न भयो । त्यतिबेला सायद बाबुराम भट्टराईको ठाउँमा म हुन्थेँ भने हिमिलेशन भएर पार्टीमा बस्दैनथें ।
प्रचण्डसँगको मतभेद माओवादी भूमिगतकालमै रोल्पामा बाबुराममाथि पार्टीले नराम्रो कारवाही गर्यो । खाने–बस्नेदेखि लिएर उहाँप्रति पार्टीले गर्ने व्यवहार एकदम तल्लोस्तरको थियो । प्रचण्डलाई केहीको अभाव हुँदैनथ्यो । बाबुराम भन्ने वित्तिकै सामान्य मानिसलाई गर्ने व्यवहार भन्दा पनि अति नै तल्लो स्तरको थियो । प्रचण्ड र बाबुरामलाई पार्टीले एकदम विभेद गथ्र्यो । बाबुरामलाई भेट्न जाने मान्छेलाई ब्लक गरिदिने, डराई–डराई लुकेर जानुपर्ने, खाने–बस्नेमा उत्तिकै समस्या थियो । रोल्पमा तल्लो तलामा गोठ हुन्थ्यो । माथिल्लो तलमा कोठा । बाबुरालाई संकेत गर्दै ‘तपाईंलाई ऊ त्यो घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ, भन्थे । त्यहाँ विस्तारा पनि नमिलाएको, असरल्ल, भद्रगोल अवस्थाको र फोहोर उत्तिकै हुन्थ्यो । म आफैं झाडु–साडु लगाइदिने, विस्तरा मिलाइदिने लगायत सबै डा.साबको ख्याल राख्थें । प्रचण्डको लागि सबै चिरिच्याट्ट मिलेको हुन्थ्यो । कुनै असुविधा हुन्थेन् । जनयुद्धकालमा पनि प्रचण्डले सुखी जीवन बिताए । बाबुरामले दुखैदुःख झेल्नुभयो । वास्तवमा माओवादी पार्टी बनाउन बाबुरामको योगदान कुनै नेताको भन्दा कम छैन् । तर, वर्गविहीन समाज बनाउने उद्घोष गरेको पार्टीबाट एक जना वरिष्ठ नेता नै थिचोमिचोमा परे । यो निकै दुखदायी थियो । पार्टीले बाबुराम माथि सौतनी व्यवहार ग¥यो । यो अवस्थामा पनि बाबुराम आत्निुभएन । ‘हामी त सामान्य जनता सरह रहने छ हो, जनताकै जीवनशैली जिउनुपर्छ, यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न’ भन्नुभयो उहाँले । मैले भने, यस्तो किन सहनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो क्षमता भएको मान्छे, यसरी सहेर त कतिन्जेल चल्छ भन्दा उहाँले ‘मेरो लक्ष्य भनेको देशमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउनु हो । गणतन्त्र नआउँदासम्म म जे सहन पनि तयार छु, म यहाँबाट छुट्टिएर गएँ भने मलाई थाहा छ गणतन्त्र आउँदैन । राजतन्त्रको अन्त्य पनि हुँदैन । त्यसै कारण म यहीँ बसेरै, हिमिलेशन सहेरै भएपनि गणतन्त्र नल्याउँदासम्म छुट्टिन्न । सबै खालको विष पिएर भए पनि गणतन्त्र ल्याएरै छाड्छु । गणतन्त्र ल्याईसकेपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि म बल्ल नयाँ बाटोमा लाग्छु’ भनेर त्यतिबेलै भन्नुभएको थियो । उहाँ कारवाहीमा परेको वर्ष ।
बाबुरामले पार्टी छाड्दा...
बाबुरामले ०७२ असोज ९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र छाड्नुभयो । उहाँले पार्टी छोड्ने निर्णय पहिलो पटक मलाई सुनाउनु भयो । हामी ललितपुरस्थित समिट होटलमा थियौं । उहाँले बिहानको ८ बजे कान्तिपुर दैनिकका सम्पदाक सुधीर शर्मा र काठमाडौं पोस्टका अखिलेश उपाध्यायलाई भेट्न बोलाउनु भएको थियो । शर्मा र उपाध्यायसँग भेटघाटको समयभन्दा हामी १५ मिनेट अगाडि पुग्यौं । राति उहाँले के सोच्नुभयो थाहा भएन, त्यसैबेला उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वदीप जी, ल आँट्नु प¥यो’ भन्नुभयो । ‘संविधान सभाबाट संविधान बन्यो । अब मौका यही हो । गणतन्त्र पनि आयो । संविधान पनि बन्यो । मेरो लक्ष्य पूरा भयो । अब नयाँ यात्रा तय गर्नुप¥यो । त्यही भएर उपयुक्त समय यही हो । अहिले पार्टी छोडेर नयाँ यात्रातिर लाग्ने निर्णय गरें, के हुन्छ ?’ उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई धेरै वर्ष पहिले थाहा थियो तर आजभोलि नै भनेर सुन्दा म अचम्मित भएँ । बाहिर उपयुक्त माहोल पनि थिएन । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बेला छ । उहाँले ‘संविधान अधूरो छ, मधेशको मुद्दा समेटिएको छैन्, जनजातिका मुद्दाहरू सम्बोधन भएको छैन्’ भन्नुभयो । उहाँले उठाएका मुद्दाहरू त ठीक थिए तर बाहिर नेगेटिभ थियो । डा.साबले उक्त निर्णय सुनाएपछि मैले भने,‘कुरा त ठीक हो, तर यो टाइमिङ उपयुक्त छैन्, बरू अलि केही समय तयारी लिएर गरौं अहिले नगरौं’ भनेर उत्तर दिएँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘टाइमिङ भन्ने कुरा त्यस्तै हो । आज न भएर भोलि सरकार भन्ने बेलामा हुन्छ, मन्त्री नपाएर, आफ्ना मान्छेलाई मात्रै बनाउन नपाएर पार्टी छोड्यो भन्छन् । पार्टी छोडेपछि एउटा न एउटा आरोप त लगाइहाल्छन् तर संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि छोड्छु भन्ने उपयुक्त समय यहीबेला हो । मैले छोड्दा नै ठीक हुन्छ ।’ त्यो दिन प्रेस मिट अर्कै कारणले गर्ने भन्ने थियो । सायद प्रेस मिट नभएको भए पनि सायद त्यही दिनमा पार्टी छाड्नुहुन्थेन कि ! प्रेस मिटमा के बोल्ने भनेर सोच्दा त्यसरी मुड बन्यो कि भन्ने लाग्छ । प्रेस मिट चार बजे थियो । आजै गर्ने भनेपछि प्रेस मिटबाट घोषणा गर्ने भन्ने भयो । उहाँको मुड बुझ्दा कुनै हालतमा पार्टी छोड्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो । मैले फेरि उहाँलाई ‘ २/४ जना मान्छे, गुट लिएर चैं निस्कन भन्दा निस्कने नै हो भने तपाईं एक्लै निस्कनुस् । एक्लै निस्केको घोषणा गर्नुस् । राम्रो तयारी गरेर पार्टी गठन गर्दा ठीक हुन्छ’ सुझाव दिएँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले पनि सोचको त्यहि हो ।’ प्रेसलाई म्याजेस गरेर आज विशेष छ भन्ने आशयले खबर गरें । त्यसपछि पार्टी छाड्ने निर्णय सेयर गर्नुभएको छोरी मानुषीसँग हो । हिसिला म्याडम रसियामा हुनुहुन्थ्यो । सायद, यो कुरा उहाँसँग सेयर हुन पाएन होला । छोड्नुभन्दा एक घण्टा अगाडि वर्षमान पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी र देवेन्द्र पौडेललाई भन्नुभयो । त्यो बाहेक अरुलाई सेयर गर्नु भएको थिएन । प्रेस मिट र प्रचण्डलाई राजीनामापत्र एकैचोटी बुझाउनु भएको थियो
उहाँ अन्र्तमुखी स्वभावको मानिस हो । उहाँले तपाईंलाई माया गर्नुभएको हुन्छ । त्यो तपाईंलाई फिल हुँदैन । कसैलाई सम्मान गर्नुभएको हुन्छ तर मान्छेलाई थाहा हुँदैन । उहाँ अन्र्तमुखी हुनु भएकाले मान्छेले मलाई विश्वास गर्नुभएन कि, राम्रो मान्नु भएन कि भन्ने भ्रम पर्छ । तर, सबैभन्दा विश्वास उसैलाई गर्नुभएको हुन्छ । फिल गराउन सक्नुहुन्न । अन्र्तमुखी स्वभावले गर्दा कोही कसैसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नुहुन्न । छिटै खुल्न पनि सक्नुहुन्न । मान्छेहरू तिनै कुरालाई कमजोरी भनेर औल्याउछन् ।
सल्लाहकार कस्तो हुनुपर्छ ?
कुनै पनि नेताको छवी बनाउन सल्लाहकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो कुरा सल्लाहकार इमान्दार हुनुपर्छ । दोस्रो, निरन्तरता हो । दुःख–सुख हुन्छ । राजनीति खेल हो जितिन्छ–हारिन्छ । हारमा दायाँबायाँ गर्ने र जित्दा हौसिने खालका प्रवृत्ति हुनुहुन्न । एउटै गतिमा, लयमा निरन्तरता दिन सकियो भने सफल भइन्छ । मिहेनत, निरन्तरता र धैर्यता, हुनुपर्छ । तेस्रोमा, तपाईंलाई समर्थन गर्ने त तपाईंसँगै हुन्छन्, तपाईंको विरोध जसले गर्छ त्यसलाई पनि पूर्वाग्रह नराखी आफ्नो टिममा लिएर हिंड्न सक्नु महत्वपूर्ण सूत्र हो ।
स्वकीय सचिवका दुःख
सचिवालय अन्य नेताहरूको तुलनामा डा.साबको राम्रो छ । यसमै मैले ‘इमेज’ बनाएँ जस्तो लाग्छ । पार्टीका अध्यक्ष तथा मेन लिडरलाई मान्छेले भेट्न खोज्छन् । दिनहुँ धेरै फोन आउँछ । भेटाइदिन प¥यो भन्छन् । सबैले डा.साबलाई भेट्न खोज्छन् । कतिपय अवस्थामा समय मिलाउन सकिदैन् । डा.साबले पनि ‘विश्वजीलाई सम्पर्क गर्नुस्’ भन्नुहुन्छ । मान्छेले मलाई सम्पर्क गर्छन् । डा.साबको समय मिलेको हुँदैन । त्यस्तै टाइमिङ पर्छ । डा.साबले भेट्न नखोज्ने पात्र पनि हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा एक/दुई पटक तीन पटकसम्म त ढाँटेर, अनेक बहाना बनाउन सकिन्छ तर चार पटकबाट फोन उठाउन पनि लाज हुन्छ । के भन्ने ? डा.साब आफैंले भेट्न खोजेको मान्छेसँग त दुई/चार दिन ढिला भए पनि भेट्न मिल्छ, उहाँले आफैंले चासो देखाउनुभएन भने मान्छेलाई के लाग्छ भने ‘बाबुराम भट्टराईले म जत्तिको मान्छेलाई किन भेट्दैन ? बाबुराम भट्टराईको कानमा खबरै पुगेन, यो सबै रोक्ने चैं विश्वदीप हो’ भन्ने खालको आरोप लगाएको अनुभव पनि छ । मेरो हकमा के भयो भने, उमेर पनि सानोे तर क्षमता र जिम्मेवारी ठूलो । म भन्दा राजनीतिमा लगानी भएका, उमेर भएका सिनियर व्यक्तिहरू धेरै हुनुभयो, उहाँहरूलाई ‘यो हिजो आको फुच्चेले हामीलाई सिकाउने ? ’ माओवादीमा छँदा पनि र अहिले नयाँ शक्तिमा छँदा पनि यस्तो भन्छन् । मेरो क्षमता देखेर मान्छेहरूलाई इष्र्या,जलन हुन्छ । निकै चुनौती सामना गरेँ । गाली त कति खाइयो खाइयो । त्यही गालीलाई ताली मान्दै म आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु । जिन्दगीमा मैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको ‘विश्वदीप पाण्डे’ भनेर बनाएको परिचय नै हो । यो परिचय राजनीतिले दिएको हो । व्यवसाय गरेको भए म पैसाँ कमाउँथें होला तर नाम कमिन्थेन । राजनीति र बाबुराम भट्टराईको साथ संगत गर्दा छोटो समयमा धेरै ज्ञान प्राप्त सिक्ने अवसर पाए बाबुराम विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थी बन्न पाएकोमा मलाई गर्व छ ।
प्रकाशित २७ चैत्र २0७४ , मङ्गलबार | 2018-04-10 02:29:26
डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप 515.2K